Semalt: Nzira yekudzivirira sei paIndaneti Chrome
Kune dzakawanda mamiriro apo vanhu vangave vachida kubvisa mawekitikiti kuwana pane ma browsers. Somuenzaniso, zvakakosha kudzivirira vana kuwana dzimwe nzvimbo. Vabereki vanodawo kugara nekodzero yekudzivirirwa kwepahwendefa yezvivako izvi zvekudzivirira kukwira kusina mvumo kune browser browser add-ons kana mamwe mawebsite. Kazhinji vanhu vanovhara mawebsite aya manyore kana kushandisa mafaira maitiro. Zvisinei, kumhanya mirairo kunogona kuva yakaoma nzira - darphin anti vegf. Ichi ndicho chikonzero vamwe vanhu vanoshandisa zvidimbu zveGoogle Chrome kuti vadzivise ushumiri hwavo hwewebhu.
Munyaya iyi SEO guideline, Jack Miller, nyanzvi yepamusoro ye Semalt , anotsanangura kuwedzera kwe Chrome semuenzaniso wokuratidza nzira iyi.
Kuvhara sei nzvimbo
Iyi nzira inogumira kune vashandisi veGoogle Chrome. Zvisinei, mamwe mabhiiyo anowedzera izvi anogona kushandisawo nzira yekuvhara mawebhusayithi. Uyezve, kuwedzerwa kwechido pano kuchava kuwedzera kweSiteBlock. Pane zvimwe zvakapeteredzwa zvakadai seSpyVisit, asi hutano hwavo hwakawanda kana kuti husingaenzani. Tevera matanho aya:
Tanga Google Chrome uye chengeta 'zvirongwa.'
Muzvirongwa zvemasimi, fambai kune 'Zvimwe zvinoshandiswa' uye chengetedza pa 'extensions.'
Kubva pano, unogona kuenda ku'wedzerwa zvakawanda. '
Menyu iyi inotanga vhidhiyo yeGoogle Chrome. Kungofanana nemapurogiramu ezvidzidzo zvakadhindwa, tsvaga 'SiteBlock' uye chengeta kupinda..
Dzvina 'wedzera kuK Chrome' kuti utange nzira yekugadzirisa uye woiririra kuti ipedze.
Paunotevera nzira iyi, unofanira kukwanisa kudzora browser yako uye mawebsite ayo munhu anogona kushanyira. Zvakakosha kuziva kuti SiteBlock yowedzera ndeyeGoogle. Iwe haufaniri kunge uine nyaya chero ipi zvayo maererano nehutano kana munyori weyi software. Iyi nzira inoda iwe kuti uwedzere nzvimbo dzaunoda izvi kuwedzera. Iwe unogona kushandisa nzira iyi kukubatsira kuti udzivise nzvimbo idzi:
Panzvimbo yeGoogle search panhare, unokwanisa kudzivirira nzvimbo kubva kuSERP popups.
Unogonawo kuenda kumigodhi.
Enda kunongedzera zvikwidziro zve Chrome yako uye sarudza SiteBlock.
Kubva pano, chengeta 'zvisarudzo.'
Wedzera mawebheji ewebhu mawebsite unoda kuvadzivirira pasi pe "nzvimbo dzekudzivirira."
Yeuka kuvhara 'kuchengetedza zvisarudzo'
Unogonawo kunyora mazita emawebsite akawanda iwe usingadi kuti vanhu vawane. Zvakakosha kusabvisa 'www kana https: //' chikamu chewebsite iwe uri kudzivirira. Iyi nzira inogona kuvimbisa kuti iwe unogadzirisa madhesi ose pasinei neprotocol. Mushure mokuchengetedza izvi, unogona kuedza addon nekuedza kuwana imwe yemasayiti mumabhuku ako akavharidzirwa. Mharidzo "Yakadzivirirwa neWatchBlock extension" inopupurira kubudirira kwemhando iyi.
Kune nzira dzakawanda dzekuti sei vanhu vachida kudzivisa mawebhusayithi mumashambadzi avo. Somuenzaniso, vamwe vabereki vangada kudzivirira vana kubva pakuwana mawebsite evanhu vakuru. Mune izvi uye nezvimwe zviitiko, vanhu vanogona kusarudza kushandisa maitiro akasiyana-siyana kudzivirira izvi kuwana. Iyi SEO nhungamiro inogona kukuratidza kuti unovhara sei mamwe mawebhusayithi uchishandisa Chrome add-ons. Kubva ku nyore kwedu kuwedzera-ku'SiBBlock, 'unogona kudzivirira kuwanikwa kweimwe nzvimbo kana masayiti kubva pa browser yako Chrome. Iwe unogonawo kushandisa iyi nzira kune mamwe ma browsers uchishandisa izvi kana zvimwe zvanduri.